Shwe FM က ၂၀၁၉ အတွက် ဆုချီးမြှင့်ခဲ့တဲ့ အဆိုတော် ၇ ဦးထွက်ပေါ်လာပါပြီ – ရှအေလငျး
Shwe FM က ၂၀၁၉ အတွက် ဆုချီးမြှင့်ခဲ့တဲ့ အဆိုတော် ၇ ဦးထွက်ပေါ်လာပါပြီ
ပရိသတ်ကြီးရေ ခုဆိုရင် ပရိသတ်ကြီးတို့ ကျနော်တို့ နားဆင်နေကြဖြစ်တဲ့ Shwe FM ဟာ ၁၀ နှစ်တိုင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်…. ၁၀ နှစ်ပြည့် နှစ်ပတ်လည်ပွဲကြီးကို မနေ့က ရက်နေ့မှာ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့ အဲဒီပွဲမှာ ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွက် အဆိုတော်တေးသံရှင်တွေကိုလည်း Shwe FM ကနေ ဆုချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်…ဘယ်သူတွေ ဘာဆုရသွားလဲဆိုတာကတော့ အောက်မှာ ဆက်ဖတ်ကြည့်နော်…..
ShweFM ရဲ့ ၂၀၁၉ခုနှစ် နှစ်ပတ်လည်ပွဲမှာ ဆုရရှိသွားတဲ့ အဆိုတော် ၇ ဦးရှိပါတယ်… သူတို့ကတော့ ပရိသတ်တွေနှုတ်ဖျား သူ့သီချင်းတွေအမြဲရွတ်ခဲ့ကြတဲ့ အဆိုတော် မနော၊ Myanmar Idol ဆုရှင်လေး ဖြိုးမြတ်အောင်၊ အသံပါဝါကောင်းကောင်းနဲ့ အိုင်းရင်း ဇင်မာမြင့် ၊ ကောင်းကောင်း၊ အချစ်ကလိုက်လို့ပြေးတာလားဆိုတဲ့ ချယ်ရီသင်း နဲ့ ဆယ်ကျော်သက်နှုတ်ခမ်းနီမလေးတို့ရဲ့ အသည်းစွဲ အုပ်စိုးခန့် တို့ပဲ ဖြစ်ကြပါတယ်…
သူတို့ရခဲ့တဲ့ ဆုတွေကို အောက်မှာ ဖော်ပြပေးထားပါတယ်နော်…
1)	ShweFMရဲ့ ၂၀၁၉ခုနှစ်အတွက် တစ်နှစ်တာ သီချင်းအတောင်းခံရဆုံး မြန်မာသံဆု တေးသံရှင် မနော က “ချမ်းမြေ့ပါစေအမေ” သီချင်း…
2)	ShweFMရဲ့ ၂၀၁၉ခုနှစ်အတွက် တစ်နှစ်တာ သီချင်းအတောင်းခံရဆုံး အမျိုးသားတေးသံရှင်ဆု ကို ဖြိုးမြတ်အောင် က ” သင့်အတွက် မနက်ဖြန်” သီချင်း….
3)	ShweFMရဲ့ ၂၀၁၉ခုနှစ်အတွက် တစ်နှစ်တာသီချင်းအတောင်းခံရဆုံး အမျိုးသမီးတေးသံရှင်ဆု အိုင်းရင်းဇင်မာမြင့်က “ရင်ဘတ်ထဲက လူနှစ်ယောက်” သီချင်း…
4)	ShweFMရဲ့ ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွက် တစ်နှစ်တာ ပရိသတ်အကြိုက်ဆုံး ( Popular Online Single Song Award ) ဆုကို ကော်နီက “ဆေး” သီချင်း…
5)	ShweFMရဲ့ ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွက် တစ်နှစ်တာ FaceBook Page မှတစ်ဆင့် အတောင်းခံရဆုံး အမျိုးသားတေးသံရှင်ဆု ကောင်းကောင်းက “ပျော်နေပါ”….
6)	ShweFMရဲ့ ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွက် တစ်နှစ်တာ Facebook Page မှတစ်ဆင့် အတောင်းခံရဆုံး အမျိုးသမီးတေးသံရှင်ဆု ချယ်ရီသင်း “ခွင့်လွှတ်ပေးဖို့တောင်းပန်ချင်” သီချင်း..
7)	New Comer Artist Award မျက်နှစ်သစ်အနုပညာရှင်ဆု ကို “အုပ်စိုးခန့်” တို့က ရရှိသွားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်…
ပရိသတ်ကြီးတို့လည်း ခုဆုရရှိခဲ့တဲ့ တေးသံရှင်တွေကို အားလုံးကြိုက်နှစ်သက်ကြမယ်လို့ ထင်ပါတယ်.. ဒီအထဲကမှ အကြိုက်နှစ်သက်ဆုံး အဆိုတော်၊ အကြိုက်ဆုံးသီချင်းတွေ ရှိရင် ပြောခဲ့ကြအုံးနော်…
Source : Shwe FM
ပရိသတျကွီးရေ ခုဆိုရငျ ပရိသတျကွီးတို့ ကနြျောတို့ နားဆငျနကွေဖွဈတဲ့ Shwe FM ဟာ ၁၀ နှဈတိုငျခဲ့ပွီ ဖွဈပါတယျ…. ၁၀ နှဈပွညျ့ နှဈပတျလညျပှဲကွီးကို မနကေ့ ရကျနမှေ့ာ ကငျြးပပွုလုပျခဲ့ပွီးတော့ အဲဒီပှဲမှာ ၂၀၁၉ ခုနှဈအတှကျ အဆိုတျောတေးသံရှငျတှကေိုလညျး Shwe FM ကနေ ဆုခြီးမွှငျ့ခဲ့ပါတယျ…ဘယျသူတှေ ဘာဆုရသှားလဲဆိုတာကတော့ အောကျမှာ ဆကျဖတျကွညျ့နျော…..
ShweFM ရဲ့ ၂၀၁၉ခုနှဈ နှဈပတျလညျပှဲမှာ ဆုရရှိသှားတဲ့ အဆိုတျော ၇ ဦးရှိပါတယျ… သူတို့ကတော့ ပရိသတျတှနှေုတျဖြား သူ့သီခငျြးတှအေမွဲရှတျခဲ့ကွတဲ့ အဆိုတျော မနော၊ Myanmar Idol ဆုရှငျလေး ဖွိုးမွတျအောငျ၊ အသံပါဝါကောငျးကောငျးနဲ့ အိုငျးရငျး ဇငျမာမွငျ့ ၊ ကောငျးကောငျး၊ အခဈြကလိုကျလို့ပွေးတာလားဆိုတဲ့ ခယျြရီသငျး နဲ့ ဆယျကြျောသကျနှုတျခမျးနီမလေးတို့ရဲ့ အသညျးစှဲ အုပျစိုးခနျ့ တို့ပဲ ဖွဈကွပါတယျ…
သူတို့ရခဲ့တဲ့ ဆုတှကေို အောကျမှာ ဖျောပွပေးထားပါတယျနျော…
1)	ShweFMရဲ့ ၂၀၁၉ခုနှဈအတှကျ တဈနှဈတာ သီခငျြးအတောငျးခံရဆုံး မွနျမာသံဆု တေးသံရှငျ မနော က “ခမျြးမွပေ့ါစအေမေ” သီခငျြး…
2)	ShweFMရဲ့ ၂၀၁၉ခုနှဈအတှကျ တဈနှဈတာ သီခငျြးအတောငျးခံရဆုံး အမြိုးသားတေးသံရှငျဆု ကို ဖွိုးမွတျအောငျ က ” သငျ့အတှကျ မနကျဖွနျ” သီခငျြး….
3)	ShweFMရဲ့ ၂၀၁၉ခုနှဈအတှကျ တဈနှဈတာသီခငျြးအတောငျးခံရဆုံး အမြိုးသမီးတေးသံရှငျဆု အိုငျးရငျးဇငျမာမွငျ့က “ရငျဘတျထဲက လူနှဈယောကျ” သီခငျြး…
4)	ShweFMရဲ့ ၂၀၁၉ ခုနှဈအတှကျ တဈနှဈတာ ပရိသတျအကွိုကျဆုံး ( Popular Online Single Song Award ) ဆုကို ကျောနီက “ဆေး” သီခငျြး…
5)	ShweFMရဲ့ ၂၀၁၉ ခုနှဈအတှကျ တဈနှဈတာ FaceBook Page မှတဈဆငျ့ အတောငျးခံရဆုံး အမြိုးသားတေးသံရှငျဆု ကောငျးကောငျးက “ပြျောနပေါ”….
6)	ShweFMရဲ့ ၂၀၁၉ ခုနှဈအတှကျ တဈနှဈတာ Facebook Page မှတဈဆငျ့ အတောငျးခံရဆုံး အမြိုးသမီးတေးသံရှငျဆု ခယျြရီသငျး “ခှငျ့လှတျပေးဖို့တောငျးပနျခငျြ” သီခငျြး..
7)	New Comer Artist Award မကျြနှဈသဈအနုပညာရှငျဆု ကို “အုပျစိုးခနျ့” တို့က ရရှိသှားတာပဲ ဖွဈပါတယျ…
ပရိသတျကွီးတို့လညျး ခုဆုရရှိခဲ့တဲ့ တေးသံရှငျတှကေို အားလုံးကွိုကျနှဈသကျကွမယျလို့ ထငျပါတယျ.. ဒီအထဲကမှ အကွိုကျနှဈသကျဆုံး အဆိုတျော၊ အကွိုကျဆုံးသီခငျြးတှေ ရှိရငျ ပွောခဲ့ကွအုံးနျော…
ရန်ကုန်တစ်မြို့လုံး Probox ကားနဲ့ ပတ်ခိုးနေတဲ့ သူခိုးဂိုဏ်းပါတဲ့
မိဘများက မရှိကြတော့ပါဘူး။ ကွဲကွာနေတဲ့ မောင်လေးနဲ့ ညီမလေးကို အမြန်ပြန်လာစေဖို့...
မူရင်းအဆိုရှင် ကေကေမိုးရဲ့ ကျွန်မ သီချင်းကို ထပ်ခါထပ်ခါ နားထောင်ချင်လောက်အောင်...